Abaqulunqi begraphic ababalaseleyo abavela eLatin America nakwihlabathi Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaphandle kwamathandabuzo, umyili wegraphic yingcali Kuya kufuneka uphathe ngokukuko izixhobo kunye nezixhobo eziqulethwe kwiinkqubo eziququzelela umsebenzi wakho, ulwazi, ubuchule kunye nobungcali Ukuchonga izinto kuyilo olulungileyo.
1 Aba zezona zoyilo zibalaseleyo kwiLatin America
1.1 UGqr Alderete
1.2 UAlex Trochut
1.3 UDavid Carson
1.4 ICatalina Bustos
1.5 UGabriela romero
1.6 UAlexander Magellan
1.7 UStefan sagmeinster
1.8 UErika coello
1.10 UNigel Holmes
1.11 UAlvaro Arteaga
1.12 UAndreas Preis
Aba zezona zoyilo zibalaseleyo kwiLatin America
Umsebenzi wakhe wobugcisa obonisa imifanekiso uyityhila eyakhe iinkcukacha zobuchule, Ezi ziyinxalenye yamaqweqwe amaninzi emisebenzi yokurekhoda yamagcisa adumileyo njengaye.
Yendalo evela eArgentina kwaye ithathelwa ingqalelo ilivo loyilo eLatin America, uyilo lwakhe lukwakhona kwingqokelela ye-anthological eboniswe ku- "Umzekeliso ngoku" no "Uyilo loMzobo waseLatin American”Kunye neegalari kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Ukongeza, ubonwe njengokonwabisa uNickelodeon, MTV, Kanye iTV kunye neCanal Fox ngokuzimeleyo kwaye ukhuthaze ezinye iiprojekthi ezinje ngevenkile yakhe ebonakalayo, ukupapasha incwadi kunye nendlu yokurekhoda.
Umenzi mizobo Imvelaphi yaseCatalan kwaye yaziwa ngokubanzi eYurophu nakwamanye amazwe, inikwe umsebenzi osikiweyo omncinci, Ngemigca echaziweyo nenobuhle, apho uphawu lomntu lunikezelwa ngohlobo lwe Umxube wobuchule bokuchwetheza ngokudibeneyo nezinye izinto ezininzi.
UAlex unabathengi abaziwayo kwihlabathi njenge-The Rolling Stones, Nike, BBH ne-Fallon, Coca Cola, British Airway nabanye abaninzi.
Iyaqwalaselwa abona baqulunqi balilo lonke ixeshaUsebenze njengomcebisi woyilo kwiinkampani ezibalulekileyo nezidumileyo ezinje ngeLevis, Nike, Pepsi, Hallmark Corporation, Burton Snowboard kunye neGotiche Clothing kwaye owona msebenzi wakhe upapashiweyo uyimveliso yakhe ulwalathiso lobugcisa yenziwe ngo-1993 kwimvumi, inkcubeko yaselwandle, Surfer, Ray Gun kunye neTransworld Skate Boarding iimagazini.
Amandla akhe kukuKhanya kwaye eneneni usebenza njenge umzobi osebenzayo, ethatha inxaxheba kwiincwadi "Umzekeliso a la Chilena" kunye neGatos Gordos kwaye namhlanje umsebenzi wakhe wangoku wenziwa njenge ukuzimela
Umzobi wegraphic, umsebenzi wakhe waziwa ngokusetyenziswa kwe- Imizobo yobugcisa okanye oopopayi kwimibhiyozo yemihla ekhethekileyo kunye nezikhumbuzo ngokunjalo.
Uyilo lwakhe lwenziwa lwasaziwa ngothungelwano lwentlalo kunye nophuhliso lweebhukumaka, amakhadi, iilebheli, eminye imizekeliso ukuze ihambelane nomthengi kunye neeprojekthi zeenkampani zabucala.
Uphumelele kwi "Isikolo sikaZwelonke soBugcisa bePlastiki”WaseMexico, ngumzobi wemizobo yesinyanzelo ekubhekiswa kuyo eLatin America ngenxa yempembelelo yemisebenzi yakhe apho ubonakalisa incasa yakhe yomzekeliso kunye nokudlala ngabalinganiswa be typographic. Umsebenzi wakhe ukhona kwiiposta kunye neencwadi phakathi kwezinye kwaye unikwe amabhaso kunye neembasa.
Ungumnikazi wakhe studio sokuyila Ukusuka apho wenza imisebenzi yakhe kubaxumi bakhe abakhethekileyo kwihlabathi lomculo, emi ngaphandle kuyilo olungaqhelekanga lwamaqweqwe, umzekelo, iRolling Stones, uLou Reed, uMariko Mori nabanye. UStefan uthathwa njengengcali xa kusiziwa kubugcisa.
Ingcali kwi Umzekeliso weVector, lo myili ubonakalise umsebenzi wakhe phesheya ngempumelelo enkulu kwaye unika iindibano zocweyo zokuxhasa uqeqesho lwabanye abantu abaqeqeshiweyo ebaleni.
Destacado Umyili waseJapan, Olomelele kukuhlola rhoqo kweendlela ezahlukeneyo zokunxibelelana kwi iimeko zedijithali ezinxibelelanisiweyo, imisebenzi yakhe ifanelekile ukuba yamkelwe kwilizwe liphela.
Uyilo lwegraphic yintoni ithathele ingqalelo ukwazisa nge infographics zangoku, amaNgesi aseka isitayile sakhe ekusebenziseni umbala omncinci, kunokuba abe nemigca emnyama emnyama kwaye esekwe kwii-silhouettes.
Ukuzazisa "ukuzifundisa", uyayichaza loo nto Umsebenzi wakhe uphenjelelwa ngamagcisa njengoQuino, Bernard Kliban, Maurice Sendack, Al Hirshfeld kunye no-Tex Avery; Ungunjingalwazi kwiYunivesithi yaseDiego Portales.
Lo myili wezinto ubalasele Imifanekiso yabantu nezilwanyanaUsebenzisa uyilo lwe-acrylic kunye ne-aerosol kuyilo lwakhe, wenza imixube engekho ngqiqweni yamanani angaqhelekanga kunye nejiyometri, esithi yonke into emngqongileyo kufuneka ibe ngumthombo wokhuthazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abona baqulunqi begraphic babalaseleyo abavela kwiLatin America nakwilizwe liphela
UFelipe Bruna sitsho
Andazi ukuba uluhlu lubi kakhulu okanye isihloko senqaku sinamandla kakhulu .. kodwa ngokucacileyo ukuba aba "ngabona baqulunqi babalaseleyo kwiLatin America nakwilizwe liphela" kuninzi kakhulu, nokungahloneli uluhlu olukhulu abanye abayili kunye nobuchule belizwekazi lethu.
Ijongeka ngathi iluhlu oluthi "Ndiyabathanda" kunento enenjongo kunye nenyani
Kanye njengesampulu; Awunakho ukubeka uCatalina Bustos kuluhlu olufanayo neSagmeister okanye iCarson, yinto ehlekisayo. Ngaphandle kokuphazamisa umsebenzi wakhe, kodwa ungumzekelo nje oqala ngokuchaseneyo namarhamncwa athe ayila aza alathisa imbali yoyilo kwiinkalo ezininzi, esebenza ngeempawu eziphambili kwihlabathi liphela, njl.
Ngapha koko, ngethemba lokulungisa ubuncinci isihloko senqaku
Phendula uFelipe Bruna